Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere ọgụgụ isi Artificial na Mmetụta ya na PPC, Native, na Ngosipụta Ngosipụta | Martech Zone
N’afọ a, amalitere m ịrụ ọtụtụ ọrụ chọrọ oké mkpa. Otu bụ akụkụ nke mmepe ọkachamara m, ịmụ ihe niile m nwere ike ime gbasara ọgụgụ isi (AI) na ahịa, nke ọzọ lekwasịrị anya na nyocha mgbasa ozi mgbasa ozi kwa afọ, nke yiri nke e gosipụtara ebe a n'afọ gara aga - ihe omuma ihe omuma nke ndi mmadu nke 2017.
Amaghị m n'oge ahụ, mana akwụkwọ ntanetị niile sitere na nyocha nke AI, "Ihe niile Need Kwesịrị Knowma Banyere Nchịkọta Ahịa na ọgụgụ isi. ” Ọ bụ n'ụzọ nkịtị ihe niile ịchọrọ ịma banyere ahịa na AI taa na mmetụta ya na nchịkọta, mgbasa ozi, ndị nwe ya na ndị akwụ ụgwọ. N'ihi ya, ọ ga-amasị m ịkekọrịta ihe m mụtara na-eme nchọpụta a niile na nso nso a na usoro abụọ.
Akụkụ nke mbụ ga-elekwasị anya na mmetụta AI na mgbasa ozi akwụ ụgwọ iji tinye PPC, ngosipụta na mgbasa ozi ala. Nke ahụ ga-abanye n'isiokwu nke abụọ nke gbadoro anya na mpaghara teknụzụ mgbasa ozi nke afọ maka afọ a. O toro site na 48% site na afọ gara aga.
Tupu anyị amalite na mmetụta nke AI na mgbasa ozi akwụ ụgwọ, anyị ga-ebu ụzọ lelee mmetụta ya na nchịkọta. Nke ahụ, ma eleghị anya, karịa ihe ọ bụla nwere mmetụta kachasị dị na mgbasa ozi akwụ ụgwọ.
Amamịghe echiche na nchịkọta
Imirikiti anyị na-eji iji otu nnukwu atọ ma ọ bụ karịa nyocha nyiwe. Ha agaghi-enwe aha. Platformszọ ndị a nwekwara ụfọdụ ọmarịcha ahịa ahịa n'ịntanetị n'ụwa. Ha enweghị ọtụtụ ihe mkpali iji nyere anyị aka belata obere ma nweta ihe ndị ọzọ.
N'ihi ya, ha na-elekwasị anya na data ruo otu ogo site na weebụsaịtị anyị. Nke a bụ ihe nke ahụ yiri:
Imirikiti n'ime anyị ejirila anya na nyocha anyị na ụdị njirimara a. Agbanyeghị, ụdị a na - anọchi anya ihe ruru 20% nke data dị na mpaghara mmetụta anyị na ntanetị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ile 80% nke ọzọ ụdị ahụ ga-elekwasị anya na data atọ dịpụrụ adịpụ na weebụsaịtị anyị. Nke a bụ ihe nke ahụ yiri:
Iji AI weghara ọtụtụ iyi data ahaziri ahazi na nke a na-adịghị edozi, nyocha nwere ike ịhụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% nke mkpokọta weebụsaịtị nwere mmetụta n'ịntanetị, na-emepe 80% anyị enweghị ike ịhụ na iji otu nnukwu nyiwe nyocha atọ. Ọ bụ nha anya na ịntanetị dị ka nke a:
N'adịghị ka echiche a nke nnukwu mmadụ atọ nyere anyị:
Inwe echiche a nwere mmetụta dị oke mkpa na mgbasa ozi akwụ ụgwọ, nke nwere ma na-akwụ ụgwọ ma ana m enyocha ngalaba nke ọ bụla na akwụkwọ ntanetị ọhụrụ m. Agbanyeghị, maka edemede a, ka anyị leba anya na mmetụta ya na mgbasa ozi akwụ ụgwọ kpọmkwem.
Amamịghe echiche na mgbasa ozi Ngosipụta
Nkebi ahịrịokwu ahụ "programmatic" na "real-bidding" (RTB) kemgbe niile uzu ikpeazụ afọ ole na ole na na gburugburu ngosi, na ugwo media ke ofụri ofụri. Mgbe ụfọdụ, a na-atụle ahịrịokwu ndị a n'akụkụ AI, mmụta igwe na nhazi asụsụ nkịtị. Ọ bụ ezie na sistemụ mmemme na nke RTB nwere AI, ha na-anọchite anya teknụzụ mmiri na-ebugharị mgbasa ozi ngosi site na ọnọdụ nke mediocre-nghọta ya ugbu a, na-egosipụta n'ụzọ zuru oke na ọdịnihu.
Teknụzụ abụọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na mgbanwe a - AI na ngọngọ. Oghere ngosipụta ahụ na-agba mgba na nghọta na njirimara. Enwere ọtụtụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ na-etinye aka ha na swiiti ahụ ma jide pennies n'otu oge nke mmefu ego anyị dị oké ọnụ ahịa. Gbakwunye na onye na-eri nri spam na-eme aghụghọ-na ị nwere sistemụ nsogbu na nsogbu.
Ná nkezi, mgbasa ozi ngosi nwere a 0.05% pịa-site ọnụego. N'ime ndị pịa-throughs naanị 30 ka 40% nke ha anaghị ibiaghachi ozugbo. Arụghị ọrụ nke ọwa a dị ịtụnanya. Ngosipụta ngosi izizi sitere na AT & T azụ na 1994 ma gosipụta 44% pịa-site na ọnụego. Site na 1998 pịa-site na ọnụego dara n'ụzọ dị egwu - nso nso nke anyị na-ahụ taa.
Ozi ọma ahụ bụ na teknụzụ na-enyere aka idozi nsogbu ndị a na enweghị ike. Na gburugburu ebe obibi nyocha nke AI nke na-etu ọnụ ogo atọ site na webụsaịtị ahụ, ụdị agaghị enwe ike ịhụ ọwa ngosi ngosipụta ọfụma na-ebugharị ha, mana ọwa niile na-arụ ọrụ nke ọma na ị na-ebugharị okporo ụzọ niile nwere akọ na gburugburu ụlọ ọrụ ha.
Site na nyocha nke AI, ụdị ga-ama ebe ha kwesịrị ịbawanye ala na ebe ha kwesịrị iwepụta ego. Ọkwa nghọta a na-enyere aka okpukpu abụọ, ọbụnakwa okpukpu atọ ịpị-ọnụego na arụmọrụ ịpị post-pịa maka mgbasa ozi ngosi.
Amamịghe echiche na ịkwụ ụgwọ kwa Pịa
Ihe nyocha nke AI nwere ike ịmepụta mkpụrụokwu ahịrịokwu kachasị emetụta maka akara site na iji ọtụtụ isi mmalite data edozighi. PPC abụghị naanị maka mgbasa ozi na Google. Ọ na-achọpụta ọdịiche ma na-akọwapụta isiokwu ọhụụ, mgbanwe mgbanwe na mgbasa ozi dị iche iche. Ọ na - enyere ndị na - ere ahịa aka ịrụ ọrụ ọfụma.
Nchịkọta enwere ike nke ahịrịokwu ahịrịokwu, otu mgbasa ozi, ịchebe, wdg.nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe maka akara. Ikwe ka e nyochaa nnukwu data a site na iji nyocha nke AI bụ ụzọ kachasị mma iji hụ na akara na-etinye ego na njikọta kachasị mma.
Iji igwe na-amụ ihe njikarịcha na-akawanye mma karịa oge. Ọ na-emewanyewanye mgbe niile ịchụpụ ego ma ọ bụ ebumnuche ọ bụla e guzobere maka PPC. Site na ọdịdị ya, nyocha nke AI na-eji ike njikwa akaụntụ, dị oke mkpa maka ụdị ndị na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa, ahịa ma ọ bụ mgbanwe ndị ahịa.
Ọ bụ ezie na AI emeela ọtụtụ okporo ụzọ na PPC, ọ ka nọ n'ọkwa ebe njikwa akaụntụ nwere ike na-akpaghị aka kpamkpam na-enweghị marketer n'azụ ụkwụ. Agbanyeghị, ihe ị ga - eme n'ọdịnihu nke e wuru n'elu netwọkụ ntanetị nwere ikike mmụta miri emi ga - aga ebe ahụ. Dị ka AI nwere ike ịkụziri ka igwu egwuregwu karịa mmadụ, ọ ga - enwe ike ịme mkpọsa PPC n'onwe ya otu ụbọchị.
Amamịghe echiche na mgbasa ozi ụmụ amaala
AI na-enwe mmetụta dị ukwuu na mgbasa ozi ala. N'ebe mgbasa ozi mgbasa ozi, iji igwe na-amụ ihe na -emepụta ego ọ bụla maka itinye aka (CPE), ma ọ bụghị ọdịnala CPC, CPM ma ọ bụ CPA. Nke a dị mma maka ndị ahịa na-achọ ịkesa ọdịnaya ha kachasị elu. Ndị na-ere ahịa ọdịnaya chọrọ ọdịnaya ha.
Site na nyocha nyocha, otu uru AI niile na-enye maka mgbasa ozi ngosi gosipụtara, kwa - ịmara saịtị ndị kachasị arụ ọrụ nke ọma n'iwepụta okporo ụzọ na-arụ ọrụ ruo ogo atọ. Ihe data a na - enye ohere maka mmefu ego ka a na - ebugharị naanị na saịtị ndị ahụ na - eme ma na - enye ndị ahịa ohere iweghachi mmefu ego na saịtị ndị ahụ adịghị. Ọhụhụ a na-enyere ndị ahịa ahịa aka izere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mkpofu, aghụghọ na mmegbu metụtara mgbasa ozi ịntanetị na-akwụ ụgwọ.
Ọ na-enyekwa echiche asọmpi ziri ezi. Nke a bara uru maka ihe ndị ọzọ na-apụtachaghị ìhè. Nakọta ngwongwo nke ihe okike nke ndị asọmpi na mgbasa ozi ala maka ngalaba ndị na-arụ ọrụ nke ọma nwere ike inye aka nye ụdị akara asọmpi na ihe okike ha. Na mgbakwunye, ọgụgụ isi ọdịnaya etinyere n'ime nyocha nke AI na-eme ka onye na-ere ahịa mara nke ọdịnaya nwere ike ịrụ ọrụ kacha mma mgbe ị na-eji usoro mgbasa ozi nke obodo iji kesaa oke.
Amamịghe echiche na nkwado nke ọdịnaya
Ngwá ọrụ ọgụgụ isi nke dabeere na AI dịkwa mma maka ikpughe syndication akwụ ụgwọ na nkwado ohere ọdịnaya. Dabere na Margaret Boland nke Business Insider, n'ime afọ ise na-esote nkwado ọdịnaya ga-abụ usoro ọmụmụ nwa ala na-eto ngwa ngwa. A na-ewere ọdịnaya nkwado dị ka mgbasa ozi nke obodo ogologo oge. Ọ bụ ihe ederede ma ọ bụ usoro isiokwu edere ma mbipụta ma ọ bụ ika n'onwe ya.
Ọ nwere ọgụgụ isi nke ọdịnaya nwere ike inyere ndị na-ere ahịa aka ka ha depụta ezigbo ederede edepụtara na mbipụta na / ma ọ bụ blọọgụ iji rịọ maka nkwado ọdịnaya ma ọ bụ ụgwọ akwụ ụgwọ na. Ọ na-enyekwa ezigbo ụzọ iji soro arụmọrụ ya karịa oge na-enweghị ịdabere na mbipụta ahụ iji nye data.
Amamịghe echiche na Social Media akwụ ụgwọ
Ka oge na-aga, ihu ọha na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta dị ala belata. Nke a mere ka ọtụtụ tinye ego na ọnụọgụ ego a na-akwụ ụgwọ na ntanetị. N'ezie, 60% nke mgbasa ozi mmemme zuru ụwa ọnụ na-emefu na mgbasa ozi ala ga-adị na Facebook site na 2020.
Ndị na-ere ahịa mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ na-achọpụta otu uru ahụ dị ka akọwara na ngalaba usoro mgbasa ozi nke ụmụ amaala dị n'elu. Agbanyeghị, otu uru kasịnụ ọ na-enye site na ịkwụ ụgwọ mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze bụ nnwere onwe data. Ndị na-ere ahịa ekwesịghị ịdabere naanị na ntaneti Twitter ma ọ bụ Facebook iji nyochaa arụmọrụ. Nhazi data na benchmarking n'ofe ọwa ntanetị niile bụ uru, kwa.
Ọzọkwa, site na nlele ogo atọ, ndị na-ere ahịa ga-enwe ike ịchọpụta ebe onye ọrụ ahụ nọ tupu ị gaa na ntanetị mgbasa ozi. Ihe omuma a nwere ike buru oke uru maka imata ebe ohuru iji kpọsaa ma ọ bụ tinye echiche echiche.
Isi okwu banyere otu AI si emetụta mgbasa ozi akwụ ụgwọ dị mfe - arụmọrụ ka mma yana obere ụgwọ. Ihe mkpofu, wayo na mmegbu ka mma ka amata nke ọma, anyị nwere echiche ka mma maka nkuku ụlọ ọrụ anyị na ịntanetị. Sonyere anyị ọzọ izu na-abịa ka anyị na-miri miri emi n'ime dum ala mgbasa ozi technology odida obodo. Maka ndị ọzọ gbasara otu AI si emetụta ndị mgbasa ozi akwụgoro na nke nwere ya, yana otu edemede ha, nweere onwe ibudata akwụkwọ m kacha ọhụrụ.
Nchịkọta ahịa na ọgụgụ isi
Tags: aiAmamịghe echicheAmamịghe echiche na nchịkọtaAmamịghe echiche na mgbasa ozi ụmụ amaalaAmamịghe echiche na Social Media akwụ ụgwọAmamịghe echiche na ịkwụ ụgwọ kwa PịaAmamịghe echiche na nkwado nke ọdịnayanwa afọ mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa ozikwụọ ụgwọ kwa Pịaịzụrụ ihe mmemme mmemmenkwado ọdịnaya